Tattoo-yada yar ee dhabarka ee ragga, soo hel naqshadaha iyo dhammaan sirtooda | Tattoo
Tattoo dhabarka yar ee ragga, waxay soo bandhigaan naqshadaha iyo dhammaan sirtooda
Tattoo gadaal nin Kuwa yar yar ayaa ah xulasho caan ah laakiin sidoo kale aad u khiyaano badan. Dhammaan naqshadaha si isku mid ah uma shaqeeyaan si fiican maxaa yeelay dhabarka ayaa ah meel aad u gaar ah, oo leh maqaar badan oo lagu daboolo.
Maqaalkan waxaan ku siin doonnaa dhowr naqshadood oo fikrado ah si ay kuugu dhiirrigeliyaan kan xiga tattoo waxaana xallin doonaa shakiyada qaar si markaa qaabkaagu u ugu fiican yahay.
1 Maxay tattoos dhabarku u yihiin xulasho murugsan?
2 Tabaha qaar si looga faa'iideysto noocan oo kale ah tatooyada
2.1 Tattoo qoorta
2.2 Aagga garabka
2.3 Feeraha, meel fiican oo loogu talagalay tattoo
2.4 Ka taxaddar dhabarka hoose
2.5 Xullo naqshadaha jiifka ah ... ama toosan
2.6 Tixgeli mustaqbalka iyo naqshadihii hore
3 Fikradaha kugu dhiirrigeliya
3.2 Tukaha iyo shimbiraha kale
3.3 Erayada (ama weedho)
3.5 Laba labo
Maxay tattoos dhabarku u yihiin xulasho murugsan?
Waxaan horey uga hadalnay marar badan baloog ku saabsan astaamaha meelaha loo arko inay leeyihiin maqaar badan oo la daboolo. Kuwaas, dhabarku waa aagga ugu weyn: si dhib leh kuma lihin walxo kale oo aan ku qaabeyno naqshadeynta (tusaale ahaan, jirkeena waxaan ku leenahay laabta, xuddunta, garbaha hore ...), oo way fududahay in tattoo aad u yar uu ku lumo baaxad ahaanta aaggan jidhka ka mid ah.
Xaqiiqdii, tatoojiyayaal badan, haddii ay u maleeyaan in naqshadeyntaadu ay aad u yar tahay oo aan la dhigin aaggan, way kuu digi doonaan. In kasta oo aad iska indho tiri karto, marka hore hubi haddii farshaxanku inuu sax yahay (ka dib oo dhan, isagu waa xirfadle soo arkay gadaal badan) ka hor go’aanka.
Tabaha qaar si looga faa'iideysto noocan oo kale ah tatooyada
Laakiin, marka la soo gaabiyo, Tattoo-yada yar ee dhabarka loogu talagalay ragga ma aha oo kaliya nooc dhibaato ah oo naqshadeynta ah, xaqiiqda, waxaa jira nashqado si wanaagsan uga shaqeeya meeshan, illaa intaad taqaanno sida looga faa'iideysto jir-dhiskaaga ama nashqaddu ay tahay cabbirka saxda ah. Waa kuwan fikrado dhowr ah:
Haddii aad dooratid inaad ku dhejiso sawirkaaga dhabarka aagga qoorta iyo midig bartamaha garbaha, waxaad dooran kartaa naqshado aad u yar in haddii aad sameyso, tusaale ahaan, bartamaha dhabarka. Sida iska cad naqshadahani waxay u muuqdaan kuwo ka toosan kuwa jiifka ah.
Waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa aagga garabka, laakiin qaybahaasi wax yar bay ka weynaan doonaan. Ka faa'iideyso qaabka wareegsan ee aagga si aad u doorato nashqaddaada.
Feeraha, meel fiican oo loogu talagalay tattoo
In kasta oo aad u xanuun badan, Haddii aad rabto tattoo yar oo dhabarka ah, feeraha ayaa laga yaabaa inay yihiin mid ka mid ah xulashooyinkaaga ugu fiican.. Maaddaama ay ku yaalliin qaybta ugu cidhiidhsan jidhka, inta u dhexeysa dhabarka iyo lathe, waxay oggolaadaan naqshadaha aad uga yar meelaha kale.
Ka taxaddar dhabarka hoose
In kasta oo sagaashannadii ay aad u caan ahayd in dadku ku sawiraan astaamo ku yaal dhabarka hoose, hadda ma ahan wax moodada gabi ahaanba. Xaqiiqdii, haweenka waddamada qaarkood xitaa waxay leedahay macno xumo. In kasta oo ay tani tahay inay na soo gaadho jillaab, waanu hoos u dhignay haddiiba ay dhacdo.
Xullo naqshadaha jiifka ah ... ama toosan
Haddii aad rabto tattoo yar laakiin dheer isla waqti isku mid ah, ha ahaato mid ballaadhan ama sarreeya, waxaad dooran kartaa naqshad cidhiidhi ah oo ka socota garabka garabka ama raacaysa lafdhabarta. U dhowaanshaha meelahaas, naqshaddu kuma lumi doonto aagga ama uma muuqan doonto wax ka yar sida ay dhab ahaan tahay.
Tixgeli mustaqbalka iyo naqshadihii hore
Mararka qaarkood tattoo yar ayaa si fudud qayb uga ah ururinta naqshadaha yaryar ee sameeya naqshad ballaaran. Xitaa haddii aad u maleyneyso in mabda 'ahaan aad kaliya rabto tattoo, waxaa wanaagsan in aad haysato inta gogo' ee mustaqbalka aad rabto inaad ku xidhato aagga. Ka dib oo dhan, khadku waa mid la qabatimo!
Isla sidaas oo kale ayaa loogu talagalay kuwa horeyba u lahaa naqshado badan: mararka qaarkood tattoo-keena mustaqbalku si fiican ugama habboon kuwa intiisa kaleTaasi waa sababta ay mudan tahay in laga fiirsado wax ka badan hal meel oo la dhigo.
Fikradaha kugu dhiirrigeliya
Mandalas, isagoo aad u faahfaahsan, wuxuu aad ugu muuqdaa dhabarka kore, wax yar uun qoorta
Tukaha iyo shimbiraha kale
Shimbiraha ayaa ku habboon dhigista dhabarka sare. Iyada oo baalasha la fidiyay aad ayey u qurux badan yihiin, ama leh naqshado aad u fudud, oo kaliya astaanta lagu calaamadeeyay, ama wax yar oo faahfaahsan, oo madow iyo caddaan ah ama midab leh. Waxay u muuqataa in mid ka mid ah tatooyada dhabarka yar ee ugu caansan ragga ay tahay tan tuke, iyagu waa wax la jeclaan karo!
Erayada (ama weedho)
Ereyadu sidoo kale waa ikhtiyaar aad u fiican oo lagu xiro dhabarkaaga. Iyagu waa nashqado yaryar, laakiin waa la dheereyn karaa ama isku urursan karaa si ay ugu haboonaato qofka la xardhay.
Naqshadeynta qabyaaladda ee dhabarka waxay u noqon kartaa jawaabta qof kasta oo doonaya tattoo yar oo caddaalad ah iyadoo weli laga quusanayo inuu indhaha qabsado. Naqshadaha jiifku gaar ahaan waa qabow, sida kiisaska shimbiraha, waxay si fiican u qaabeeyeen garbaha.
Ugu dambeyntii, Fikrad kale oo wanaagsan oo aad ku heli karto sawir dhabarka yar ee qabow ee ragga ayaa ah in la doorto laba qaybood oo yaryar, midna garab kasta. In kastoo ay yaryihiin, iyagoo labo jira haddana ma noqon doonaan kuwo aan ciirsi lahayn. Xisaabta ku darso inaad doorato laba naqshadood oo isku mid ah ama aad isugu eg ama ay qaab yihiin si joomatari ahaan isu waafajiyo.
Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay oo aad u waxyooday maqaalkan ku saabsan tattoos dhabarka yar ee ragga. Noo sheeg, ma haysaa wax sawir ah oo sidan oo kale ah? Sideed u aragtaa meeshan? Xusuusnow inaad noo sheegto wax kasta oo aad rabto faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoos dhabarka » Tattoo dhabarka yar ee ragga, waxay soo bandhigaan naqshadaha iyo dhammaan sirtooda
Tattoo geedka qoyska si marwalba qoyskaaga maskaxda loogu hayo
Tattoo Triforce, oo ah astaamaha quraafaadka iyo astaamaha Zelda